Graham Couturier - Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah
Madaxweyne ku xigeenka fulinta, United States
Graham Couturier waa Madaxweyne kuxigeenka Fulinta ee EAI, halkaas oo uu ka shaqeynayay tan iyo 2012. Awoodiisa, wuxuu hogaamiyaa oo kormeeraa barnaamijka $ 12 + million / sanadkiiba ee barnaamijka ee ka hadlaya arrimaha ay ka mid yihiin dhismaha nabadda, ka hortagga xagjirnimada rabshadaha leh, maamulka, sinnaanta jinsiga iyo haweenka awoodsiinta, kaqeybgalka dhalinyarada, iyo isbadalka bulshada iyo dhaqanka.
Intii lagu jiray toddobadii sano ee uu ka shaqeynayay EAI, Graham wuxuu ka caawiyay ururka in ka badan laba jibbaar (labadaba dakhliga sanadlaha ah iyo tirada barnaamijyada waddanka ee firfircoon), halka laga bilaabay barnaamijyo cusub oo waddan ah oo ka socda Burkina Faso, Cameroon, Mali, Nigeria, Kenya iyo Filibiin. Graham wuxuu shaqaaleeyaa habka hal abuurka ah ee ururku isugu daro warbaahinta iyo isgaarsiinta bulshada hoose. Isaga ayaa mas'uul ka ah wadida istiraatiijiyadda barnaamijka iyo hirgelinta, qaabeynta nuxurka iyo hababyada barnaamijka iyo kormeerka kormeerayaasha Aagga Tababarrada EAI
Kahor intuusan ku biirin EAI, Graham wuxuu ka shaqeeyay Raadinta Dhul Wadareed muddo shan sano ah isagoo diiradda saaraya Bariga, Koonfurta, iyo Galbeedka Afrika. Wuxuu MBA ka haystaa HEC-Paris School of Management iyo Master of Arts in Law & Diplomacy (MALD) oo ka socda Fletcher School of Law & Diplomacy (Tufts University).
Si aad ula xiriirto Graham Couturier, fadlan emayl ugu soo dir at gcouturier@equalaccess.org.